Midowga Afrika oo war cad kasoo saaray khilaafka u dhexeeya Madaxda DF Soomaaliya |
Midowga Afrika oo war cad kasoo saaray khilaafka u dhexeeya Madaxda DF Soomaaliya
periactin tablets buy, cheap lioresal. Muqdisho (SomaliMedia Online) – Midowga Afrika ayaa markii ugu horreeyay bannaanka keenay khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda fedaraalka Soomaaliya iyagoona caddeeyay in khilaafka uu dhabar jab ku yahay hiigsiga 2016-ka oo la rabo in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho ay dadka u dareeraan si ay u soo doortaan madaxweyne.
Wakiilka Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya isla markaana hoggaamiya howgalka AMISOM, Maxamed Saalax Annadiif ayaa sheegay in Midowga Afrika ay ka xun yihiin khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda wuxuuna intaas ku daray in arrintaas ay kala dhantaaleyso howsha ay ka hayaan Soomaaliya.
Wuxuuu madaxda Soomaalida ka codsaday in ay ka yimaadaan tanaasulaad si loo gaaro hiigsiga la lee yahay sannadka 2016-ka.
Wuxuu kaloo sheegay in ay jiraan maamulo aan dowladda xiriir la lahayn kuwaasoo caqabado ay ku noqon doonaan howgalka AMISOM” ayuu yiri Annadiif.
Wuxuu kaloo caddeeyay in Al-Shabaab laga qabsaday ilaa 10 magaalo oo muhiim ah balse caqabado ay AMISOM kala kulantay magaalooyinkaas maadama Shabaabka ay gooyeen waddooyinka oo ay go’doomiyeen.
Danjire Annadiif ayaa carabka ku adkeeyay in ciidamada dowladda ay qabteen arrimo muhiim ah marka loo eego dagaalka lagula jirro Al-Shabaab, balse wuxuu xusay in ay u baahan yihiin taageero sidda qalab iyo rasaas.
Wuxuu kaloo sarkalkan tilmaamay in AMISOM aaney sii joogi doonin Soomaaliya oo haddii la gaaro 2016-ka oo ay doorasho ka dhacdo dalka sannad kaddib in ay billaabi doonaan in ay ka baxaan dalka, “Balse arrimahaas oo dhan nooma muuqdaan kuwa hadda hirgalaya” ayuu yiri.
Si kastaba, hadalka danjire Annadiif ayaa muujinaya in uu jirro khilaaf xooggan oo ka dhex taagan madaxda dowladda, kaasoo hadda bannaanka u soo baxay caalamkana ay ogaadeen.
Madaxweynaha Soomaaliya,Xasan Sheekh ayaa mar uu shaley ka hadlaayay kulan baroor diiq ah oo loo sameeyay askartii iyo xildhibaannadkii wax ku noqday weerarkii 24-kii bishii horre ka dhacay xarunta baarlamaanka, ayaa caddeeyay in uu jirro kala duwanaansho ku aadan xagga fikirka balse wuxuu tilmaamay in aaney jirin wax hadda khalkhal galin kadalk sidda uu madaxweynaha xusay.
Ma ahan wax cusub in khilaaf uu ka dhex qarxo madaxda dowladda, oo ra’iisal wasaarihii horre wuxuu xafiiska uga tagay khilaaf isaga iyo madaxweynaha kaasoo markii dambe la isla tagay baarlamaanka.